Curso de birmanês > português| Conversação | Tradução
Você fala birmanês?
Não, não falo birmanês
Curso birmanês - Conversação
Bom dia. Como estás? နေကောင်လား - nai kaung lā
Bom dia Vou bem, obrigado နေကောင်းပါတယ် - mai kaung pa tai
Você fala birmanês? ဗမာ/မြန်မာ စကားပြောတတ်လား - Myamar sa kā pyau tat lā
Não, não falo birmanês ဗမာ/မြန်မာ စကားမပြောတတ်ဘူး - Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
Só um pouco နည်းနည်းလေး - nei nei lai
Vens de que país ? ဘယ်နိုင်ငံကလာသလဲ - bai Naing ńgan ga la the lai
Qual éatua nacionalidade ဘာလူမျိုးလဲ - ba lu myō lai
Eu sou português ကျနော် ပေါ်တူဂီ(စ) လူမျိုးပါ - kya nau portuguese lu myo ba
Eu sou portuguesa ကျမ ပေါ်တူဂီ(စ) လူမျိုးပါ - kya ma portuguese lu myo ba
E tu, vives aqui? ဒီမှာနေတာလား - di mha nai ta lā
Sim, moro aqui ဟုတ်တယ်၊ ဒီမှာနေပါတယ်။ - hoʔ tai di mha nay pa tai
Chamo-me Sarah,etu? ကျမနာမည်က ဆာရာ ရှင့်နာမည်ရောဘယ်လိုခေါ်သလဲ။ - kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
Juliano ဂျူလီယံပါ - ju li an ba
O que fazes aqui? ဒီမှာဘာလာလုပ်တာလဲ - di mha ba la lōʔta lei
Estou de férias အလည်လာတာပါ။ - ah lai la ta ba
Nós estamos de férias ကျနော်တို့ အလည်လာတာပါ။ - Kya nau to' ah lei la ta ba
Ando em viagem de negócios အလုပ်အတွက်လာတာပါ။ - ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
Trabalho aqui ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ - di mha ba la loʔ lōʔ lei
Nós trabalhamos aqui ကျမတို့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ - kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
Quais são os bons lugares para comer? စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်း ဘယ်မှာရှိပါသလဲ - sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
Há algum museu aqui perto? ဒီနားမှာ ပြတိုက်ရှိသလား - ̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
Onde tenho acesso à internet? အင်တာနက်ဆိုင်ဘယ်မှာရှိသလဲ - iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei